Hey’adda qaxootiga iyo tirada qaxootiga ah ee sanadkaan la filayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hey’adda qaxootiga iyo tirada qaxootiga ah ee sanadkaan la filayo
La daabacay onsdag 27 april 2016 kl 10.18
Odoroska qaxootiga sanadkaan
Qof qaxooti ah. sawir: Jessica Gow/TT
Hey’adda qaxootiga dalkaan Iswiidhan ayaa qiyaaseysa in qaxooti u dhexeeya 40 000 ilaa iyo 100 000 oo qof ay sanadkaan magangalyo doon ahaan u imaan doonaan dalkaan Iswiidhan.
Hey'adda ayaa odoros ahaan qabta in qiyaastii 60 000 oo qaxooti ah la filan karo in ay dalkaan iska dhiibaan sanadkaan .
Mikael Ribbenvik waa madax waaxeedka hawlgalka u qaabilsan hay’adda qaxootiga:
Yurub in la soo galo wey adkaatey, xuduudadii ay dadku ka soo gudbi jireen ayaa la xirey ,heshiiska dalalka yurub la galeen dalka Turkiguna wuxuu yareeyey qaxootigii u soo gudbayey jasiiradaha dalka Giriiga , ayuu yiri Mikael Ribbenvik.
Hey’adda qaxootiga ayaa bilowgii bishii febraayo waxay ku qiyaastey qaxootiga la fili karo in ay Iswiidhan sanadkaan yimaadaan 140 000 oo qof, balse waxaa mudadaas ka dib aad hoos ugu dhacey qaxootigii soo galayey dalkaan sababtoo ah wadamada yurub oo xuduudadooda adkeeyey iyo dalalkaas yurub oo heshiis qaxootiga lagu xakameynayo la galey dalka Turkiga.
Afartii bilood ee ugu horeeysey sanadkaan ayaa dalkaan Iswiidhan waxaa soo galey 9 000 oo qaxooti ah meesha isla xiligaas sanadkii hore ay dalkaan Iswiidhan iska dhiibeen qaxooti gaaraya 13 000 oo qof.